प्रधानमन्त्री ओलीले एक्कासी किन बोलाए मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार ?
काठमाडौं/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यहरुलाई बालुवाटार बोलाएका छन् । स्थायी समितिको मंगलवारको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदवाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली
प्रचण्डलाई सुनाइदिनू म अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छोडदिन :ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतसहितका शक्ति लागिपरेको र त्यसमा नेपालका नेताहरूको समेत साथ रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आफ्नै पार्टीभित्र झन् अप्ठेरोमा परेका छन् । स्वेच्छाचारी कार्यशैलीमाथि
कसले दर्ता गर्‍यो निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ ?
काठमाडौं, १७ असार । नेकपाभित्र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ नामको दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र
आफ्नै पार्टीभित्र ओलीको राजीनामा माएिपछि भारतीय मिडियामा खुसियाली…
काठमाडौं, १६ असार । भारतको मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र राजीनामा मागिएको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । स्थायी कमिटि बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,
नेकपा फुटको संघारमा, रोकिएला त दुर्घटना ?
काठमाडौं, १६ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थायी कमिटि बैठकमा बहुमत सदस्यले राजीनामा मागेपछि फुटको सम्भावना बढेको हो
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएपछि रनकिए गोकुल बाँस्कोटा !
काठमाडौं, १६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि उनका विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटाले कडा चेतावनी दिदै धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आज फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीमाथिका हमलाहरु योजनावद्ध भएको लेखेका
काठमाडौँ, १६ असार । नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेपछि सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीमा छलफल भएको छ । आइतबार नेकपा एमाले नाममा पार्टी दर्ता गर्नका लागि
काठमाडौँ, १६ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको उनकै अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ । नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष
प्रचण्डले तपाईकाे राजीनामा भारतले हैन मैले मागेकाे हुँ ! भनेपछि ओली उड्यो होस्
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नकेपा) स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यापक आलोचना भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा मागिएपछि नेकपामा खैलाबैला
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेपछि हलचल मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कृयाकलाप र